काँग्रेसको नजर नयाँ सरकारतिर, कहाँ कहाँ भइरहेको छ कसरत ? - Khula Patra
काँग्रेसको नजर नयाँ सरकारतिर, कहाँ कहाँ भइरहेको छ कसरत ?
प्रकाशित समय: १७:४२:४८
मधेशवादी दलका नेताहरुसँग ‘साइड टक’
काठमाडौं– हरेकपटक झैं यसपटक पनि चुनाव सकिएसँगै दलहरुले सरकार निर्माणका लागि हिसाबकिताब शुरु गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र र एमालेको वामगठबन्धनले चुनावबाट नै बहुमत प्राप्त गरेका कारण सरकार उसैले बनाउने लगभग निश्चित छ । तर, राजनीतिमा हरेक सम्भावना खुल्ला हुने भएकाले सरकार निर्माणको अरु विकल्पका बारेमा पनि बहसहरु शुरु भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व लिन काँग्रेसले पनि भित्रभित्रै आफ्नो हिसाबकिताब गरी तारतम्य मिलाईरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा २३ सिट पाएको काँग्रेसले समानुपातिकबाट झण्डै ४० पाउँदा कम्तीमा ६३ सिट हुने देखिन्छ ।
समानुपातिक मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले कांग्रेसले कुन दलको कति थप सीट आउँछ,े हिसाबकिताब गर्न थालेको छ । उसले मधेशवादी तथा अन्य साना दललाई मिलाउने र त्यसबाट पनि नपुगे वामगठबन्धन नै भत्काएर काँग्रेससहितको सरकार बनाउने खेल शुरु भएको छ ।
यसका लागि काँग्रेसका नेताहरु मधेशवादी दलका नेताहरुसँग ‘साइड टक’ शुरु गरेको छ । ‘सरकार बनाउनका लागि काँग्रेसले पनि एकपटक प्रयास गर्ने हो’, कांग्रेस निकट एक नेताले भने, ‘वामगठबन्धनले नै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । काँग्रेसले पनि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्छ । त्यसका लागि दलहरुकाबीचमा अनौपचारिक छलफलहरु भइरहेका छन् ।’
काँग्रेस स्रोतकाअनुसार मधेशवादी दलसँग विजयकुमार गच्छदारले कुराकानी गरिरहेका छन् । १० वर्षसम्म लगातार मधेशी राजनीतिक नेताहरुसँग निकट रहेर काम गरेका गच्छदारलाई मधेशवादी दलका नेताहरुसँग कुराकानी गर्न सजिलो भएको हुनाले उनले आफ्नो तरिकाले कुराकानी अगाडि बढाएका छन् ।
मधेशवादी दल वामगठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग नजिक रहेको छ । र, मधेशवादी दललाई जति फाइदा लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग हुन्छ त्यति फाइदा वामगठबन्धनसँग नहुने मधेसवादी दलका नेताहरु बताउँछन् । राजपा नेपालका एक नेताले भने– ‘वामगठबन्धनसँग सरकारमा गएमा मधेशवादी दलले तीन मन्त्रालय मात्र पाउने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मिल्दा पाँचदेखि छ वटा मन्त्रालय पाउन सकिने सम्भावना छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा काँग्रेस पुगेको छ ।
शुक्रबार मात्रै एक कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री एवं काँग्रेस नेता महेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुहुन्छ, परिवर्तनकारी उपलब्धिहरू संस्थागत हुन्छन् । उहाँबाट मात्रै यी उपलब्धिहरू रक्षा हुन सक्छन्’, मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड) आफै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’ यो कुरा यादले मात्र होइन, काँग्रेसका अन्य नेताहरु पनि सार्वजनिक रुपमा भन्दै आइरहेका छन् ।
यता, भारतले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण नहोस् भनि चाहेको देखिन्छ । वामगठबन्धनलाई भत्काएर माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र मधेसवादी दल मिलाएर सरकार गठन गर्ने प्रयासहरु भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
एमालेका कतिपय शीर्ष नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड झस्केका छन् । शुक्रबार प्रचण्ड र ओलीबीच भएको वार्ताले ठोस रुप लिएको छैन । ओलीको भेटपछि शनिबार देउवा र प्रचण्डबीच भएको भेटघाटलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।